Suuq Kireyste: Xagee Loo Shaqaaleeyaa Suuq Ganacsi Madaxbanaan Oo La Xaqiijiyay | Martech Zone
Sannadkan wuxuu caqabad ku ahaa ururo badan. In kasta oo ay tahay sheeko xasaasi ah, saddex isbeddel oo aan u kuurgalayo waa:
Badalka Digital - diiraddii hore ee khibrada macaamiisha dibada waxay u weecatay otomaatiga gudaha iyo is dhexgalka ururada waaweyn maadaama ay yareeyaan shaqaalaha iyo kharashyada.
Kooxaha fog - U wareegida shaqada ee guriga inta lagu jiro aafada, shirkaduhu waxay u wareejiyeen fikradooda ku saabsan ka shaqaynta guriga waxayna u furan yihiin wada shaqeyn fog.
Qandaraaslayaal Madaxbanaan - shirkadaha waaweyni waxay ku kordhinayaan shaqaalahooda joogtada ah qandaraaslayaasha iyo suuq geynta suuq geynta. Laga soo bilaabo “CMO for Hire” ilaa naqshadeeyayaasha garaafyada ors qandaraaslayaashu waxay qayb muhiim ah ka noqonayaan shirkad kasta.
Xagee laga Helaa Suuqgeyaal Madaxbanaan
In kasta oo ay jiraan tiro badan oo boggag internet ah oo laga helo hibo, waxaa jira ilo yar oo kaa caawinaya kala shaandheynta iyo maaraynta hibada aad qandaraaska siineyso. Sidoo kale, inta badan adeegyadu waxay u baahan yihiin qoris ballaaran iyo qandaraasyo waqtiyeyn ah iyo khidmadaha joojinta in kasta oo ay jiraan heerarka fashilaad weyn.
Kireynta Suuqa waa adeeg loogu talagalay shaqaaleynta karti-hore loo hubiyay si ururkaagu ugu dari karo suuq-yaqaan la xaqiijiyay kooxdaada wax ka yar toddobaad! Waxay bixiyaan khidmado shaqaalayn oo hooseeya, oo aan lahayn khidmad joojineed, oo waxay leeyihiin qiime aad u hooseeya oo shaqo-qorista saacad, qayb-dhiman, ama waqti-buuxa ah.
Sidee MarketerHire u Iibiyaa Ganacsatada
MarketerHire waxay leedahay hannaan adag oo baaris freelancer ah waana suuqley laftooda - marka waxay raadiyaan khubaro la xaqiijiyay oo leh xamaasad iyo wadis. Boqolaal suuqley ah ayaa dalbada bil kasta, laakiin Kireynta Suuqa kaliya waxay shaqaaleysiisaa wax kayar 5%. Waxay:
Shaqaaleeya Fanaaniinta Sare - waxay kormeeraan kooxaha Facebook, forumyada, iyo LinkedIn si loo aqoonsado loona xaqiijiyo hibooyinka.
Dib-u-eegista Xirfadda Qoto-dheer - waxay dib u eegaan khibrada xirfadeed, jawaab celinta macmiilka, iyo shaybaarada shaqada iyo waliba qiimeyn xirfad gaar ah leh.
Wareysi Video ah - in la qiimeeyo xirfadaha wada xiriirka, fikirka adag, iyo xirfad ahaanta.
Mashaariicda Tijaabada - aqbalaadda ka dib, musharrixiinta waxaa loo qoondeeyay mashruuc tijaabo ah oo leh xaalad dhab ah oo adduunka ka jirta si ay u muujiyaan karti, hufnaan, xirfad-wanaag, iyo sharaf.
Wanaagsan oo Sii Socda - waxqabadka waxaa dib loola eegaa macaamiisha 2dii usbuucba mar si loo hubiyo adeeg tayo leh iyo isgaarsiin.
Waxaad iskaashi la yeelan doontaa maareeyaha suuq geynta nidaamka oo dhan. Iyaga ayaa kaala hadli doona mashruucaaga, kaa caawin doona go'aaminta waxaad u baahan tahay, waxayna kugula mid dhigi doonaan suuqgeeye. Ka dib markay kireysigaagu bilaabmo, waxay hubin doonaan hubinta in heerarkeenna sare la buuxiyo.
Habka loogu talagalay Kireynta Suuqa waa deg deg oo aan kala go 'lahayn:
Sharax mashruucaaga - U sheeg MarketerHire wax ku saabsan mashruucaaga. Ma waxaad raadineysaa hal khabiir ku takhasusay kanaalka ama inaad dhisto koox wadooyin badan ah? MarketerHire ayaa jadwal kula sameysan doonta wicitaan si aad wax badan uga ogaatid mashruucaaga isla markaana aad faham fiican uga hesho baahidaada saxda ah.
La kulan suuqgeyahaaga saxda ah - Mar haddii maareeyahaaga suuqgeynta uu fahmo mashruucaaga, waxay baari doonaan shabakadooda suuqleyda si ay u helaan kulan weyn. U sheeg inaad jeceshahay suuqleyda lagu taliyay waxaanan jadwal u sameyn doonnaa wicitaan hordhac ah si aad ula kulanto oo aad dib ugu eegaan mashruuca. Haddii aadan hubin ku saabsan qalabka wax lagu kireeyo, waxay dejin doonaan intros badan.
Ka-saar mashruucaaga - Isla marka aad oggolaato suuqgeyntaada, waxay diyaar u noqon doonaan inay bilaabaan mashruuca oo ay ku milmaan kooxdaada. Maamulahaagu wuu is-hubin doonaa labadii toddobaadba mar. Haddii sabab kasta ha noqotee aadan ku faraxsanayn suuqleydaada, waxay kugula mid dhigayaan mid cusub.
Majiraan shaqo qoris, wareysiyo la'aan, madax xanuun majiro… iskuday Kireynta Suuqa maanta. Doorka la heli karo waxaa ka mid ah suuqleyda Amazon, suuqgeeyayaasha sumadaha, Saraakiisha Suuqgeynta Sare, Suuqgeeyayaasha suuqgeynta, suuqgeeyayaasha emailka, suuqgeyaasha kobaca, Suuqgeeyayaasha SEO, suuqgeyaasha raadinta lacag bixinta, suuqgeyaasha warbaahinta bulshada, iyo suuqgeyaasha warbaahinta bulshada ee mushaarka qaata.
Ganacsatada kireysta U codso sidii Freelancer
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa tayda Kireynta Suuqa xiriiriye ku xiran maqaalkan.
Tags: ganacsato madax banaansuuqleeysuuqyadaiskaa wax u qabso suuq geyniibiyayaal lacag bixin ahlacag bixiyeyaasha warbaahinta bulshadamushaharkiiba gujixayeysiiyaasha baraha bulshadasuuqyada warbaahinta bulshada